မြန်နှုန်းမြင့်ရထား - RayHaber
[13 / 10 / 2019] အဆုံးသို့ချဉ်းကပ်သော Ankara Sivas YHT လိုင်း! ..	06 တူရကီ
[13 / 10 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု	16 Bursa
[13 / 10 / 2019] Hyperloop ရထားကို 2040 မတိုင်မီအထိဖွင့်လှစ်ရမည်	1 အမေရိကတိုက်
[12 / 10 / 2019] တူရကီ-ပိုလန်ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရထားစနစ်	48 ပိုလန်
[12 / 10 / 2019] ခရီးသည်များဒလိုင်းနံပါတ်ပြင်ပလေဆိပ်နဝမလတူရကီပြည်သူ့အင်အားလွန်	06 တူရကီ
[12 / 10 / 2019] IETT အမျိုးသမီးယာဉ်မောင်းလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက်ကိုအောက်တိုဘာ 15 အထိသက်တမ်းတိုးသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 10 / 2019] အမျိုးသမီးဘတ်စ်ကားမောင်းသူဝယ်ယူရန် EGO	06 တူရကီ
[12 / 10 / 2019] TCDD ဝေမျှခြင်းကိုနာကျင်စေသောမိခင်၏တုန့်ပြန်မှု	59 Corlu
[12 / 10 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လှစ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 10 / 2019] Traffic စိတ်ပညာရှင်သည် Metrobus ယာဉ်မောင်းများဖြစ်ရမည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီအစာရှောင်ခြင်းရထားနာရီ
18 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 26 Eskisehir, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, Maps, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
high-speed ရထားကွဲပြားခြားနားသောအထူးလျှော့စျေး၏လူဦးလည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအကြိုးခံစားစေခြင်းငှါသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားဈေးလျှော့ 20 50 %% နှုန်းနှင့်အတူခြားနားသည်။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်နာရီ 18 / 11 / 2013 မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်အလုပ်ချိန်: Eskisehir-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားပြေးအကြားနှင့် Polatli ရပ်တည်ချက်အတွက် Eskisehir 16.35 1-လအစမ်းခဲ့ထံမှပြောင်းရွှေ့။ ခရီးသည်ဆိုပါကဒါဟာအမြဲတမ်းရပ်တည်ချက်တစ်ခုလုံလောက်သောအရေအတွက်အားဖြစ်လိမ့်မည်။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများအသက်အရွယ် TL ၏ဒေါက်တာ 25 12 12.5 နှစ်ပေါင်း£။ အသက်7နှစ်ပေါင်းသူ့မိသားစု ticketless စီးနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကအခန်းနှင့်စျေးနှုန်းများ 35 17.5 TL ။ သင်ကလက်မှတ်အပေါ်က Button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်မှတဆင့်လက်မှတ်တွေကိုရရှိနိုင်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းရထား Reservation များ: ဖုန်းနံပါတ်။ သင်ကeစာအုပ်ထင်လျှင်မူကား, သင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် input ကိုများအတွက် TCDD-အင်တာနက်အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖန်သားပြင် ...
Afyon နှင့်Kütahya Eskisehir အချိန်နှင့်နာရီကနေမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား link ကိုလေ့ကျင့် 02 / 09 / 2012 71622 ဘိန်း V ကို: မြန်နှုန်းမြင့်ထံမှ ESKISEHIR AFYON Training connection 17.45 Noli Eskişehir K သည်လေ့ကျင့်လေ့ 20.59 71621 Noli ရထားဘိန်းငွေကျပ်: 07.20 Eskisehir V ကို: 10.50 Kutahya V ကို: 09.00 ESKISEHIR မြန်နှုန်းမြင့်ထံမှ KUTAHYA Training connection Eskisehir K သည်လေ့ : 10.16 Eskisehir ငွေကျပ်: 13.00 Kütahya V ကို: 14.15 Eskisehir ငွေကျပ်: 19.50 Tavsanlı V ကို: 21.58 Tavsanlıငွေကျပ်: 06.40 Eskisehir V ကို: 08.48 Kutahya ငွေကျပ်: 11.10 Eskisehir V ကို: 12.28 Kutahya ငွေကျပ်: 17.15 Eskisehir V ကို: 18.32
Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား YHT နာရီ - တူရကီကနေ 04 / 12 / 2012 တူရကီကနေ - တူရကီသည်တူရကီ - - Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား YHT Konya ကနေချောင်းမြောင်းဇန်နဝါရီလ 17.08.2012 ထံမှထိရောက်သောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားဆိုက်ရောက်ချိန်, ထွက်ခွာအချိန် YHT မြန်နှုန်းရထားရဲ့ထွက်ခွာအချိန်ဇယား၏ Konya YHT အချိန်အပြောင်းအလဲနဲ့; Konya - - တူရကီကနေ Konya ထံမှ - တူရကီမှမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား YHT ရထားနှင့်ထွက်ခွာ functioning - ဆိုက်ရောက်ဗီဇာအချိန်ဇယား Hz (နေ့စဉ်ရေးရာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, သောကြာနေ့, စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေများမှာ) ။ Mevlana အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အခမ်းအနား Konya မှ, 08 09 အပေါ်လည်းတူရကီ မှစ. , 14 မှစ. တူရကီ, Konya သည့် နေ့မှစ. 15 Vuslat Seb 16, 2012, 08.16, 19.05, 17.12.2012 ဒီဇင်ဘာလ 08.16 23.30 ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထားနာရီ 25 / 12 / 2012 ရက်စွဲ 17.08.2012 ကနေတရားဝင်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားနာရီ; တူရကီ - KONYA - တူရကီအလုပ်မြန်နှုန်းမြင့်သင်တန်းနှင့်နာရီအကြားတူရကီထွက်ခွာနာရီကနေ (နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရာဖြစ်ကြ၏): တူရကီငွေကျပ်: 07.00 Konya V ကို: 08.52 (Sincan က F: 07.24 Polatli အဘယ်သူမျှမချိုး) တူရကီငွေကျပ်: 09.35 Konya V ကို: 11.30 ( Sincan က F: 09.59 Sincan က F: 10.19) တူရကီ KIM: 11.30 Konya V ကို။ 13.20 (ကျန်း-Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး) တူရကီငွေကျပ်: 13.00 Konya V ကို: 14.52 (Sincan က F: ။ 13.24 Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး) တူရကီငွေကျပ်: 15.15- Konya V ကို: 17.07 (Sincan က F: 15 ။ 39 Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး) တူရကီငွေကျပ်: 17.15 Konya V ကို: 19.05 (ကျန်း-Polatlıကိုရပ်တန့်ကြဘူး။ ) တူရကီငွေကျပ်: 18.30 Konya V ကို: 20.25 (Sincan က F: 18.54 Sincan က F: 19.14) တူရကီ KIM: 20.45 Konya V ကို: 22.40 (Sincan က F: Sincan က F 21.09: 21.29 တူရကီ-V ကို: 06.45) Departure နာရီ Konya Konya K သည်ထံမှ 08.32 (Polatlı ...
ဝန်ကြီး Turhan: 'ကျွန်တော်တို့ဟာတူရကီအလံလွှင့်ထူထားတဲ့သင်္ဘောအားလုံးကိုဂြိုဟ်တုတွေကြားမှာခြေရာခံနိုင်တယ်'
Traffic စိတ်ပညာရှင်သည် Metrobus ယာဉ်မောင်းများဖြစ်ရမည်
Amasya Nostalgic Tram စီမံကိန်းအတွက် Accelerated အလုပ်
မော်စကိုမှစိန့်ပီတာစဘတ်သို့ရထားဖြင့်2သို့
ISAF ဖြင့်တစ်နေ့လျှင်4တစ်မျိုးတည်းကိုသာထောင်နှင့်ချီသောအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူပါ။ ..
Afyon နှင့်Kütahya Eskisehir အချိန်နှင့်နာရီကနေမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား link ကိုလေ့ကျင့်
Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား YHT နာရီ - တူရကီကနေ
Eskisehir နှင့် Konya, Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
Konya, အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Times နှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (214) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြပွဲမာစတာများ Afyon တွင်တွေ့ဆုံသည်